Dị ka aha na-atụ aro a video oghere dabeere na Anụ West isiokwu. Gịnị na-egbu ihe na ọ bụ atọ ọchị akwụkwọ style ndịna na eserese. Ọ nwere a ezigbo gameplay na dị na ọtụtụ online casinos na free ohere mpere dịghị nkwụnye ego atụmatụ. The oghere bụ ihe niile banyere free spins na multipliers. Iwuli elu n'ụgbọ okporo ígwè na-emeri ụfọdụ nnukwu ụgwọ ọrụ na nwere ọtụtụ nke fun.
Banyere Mmepụta nke Wild Wild West: The Great Train Heist ohere mpere
NetEnt bụ Mmepụta nke a oghere egwuregwu. Ha ndị pụtara ọhụrụ na-azụ ahịa ma masịrị onye ọ bụla na nkà ha. Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma oghere egwuregwu ha kere. Ha na-arụ ọrụ dị iche iche na nnukwu aha casinos na-enye free slots and no deposits. Ha mepụtara a nnukwu onye ofufe isi na-aghọ ndị ọzọ na-ewu ewu kwa ụbọchị.
Nke a oghere egwuregwu dabeere akụkọ nke anọ villains na-apụnara a ụgbọ okporo ígwè. The oghere nwere na-atọ ọchị akwụkwọ style ndịna na a ekele soundtrack na-egwu na-akụ n'okirikiri. Ọ nwere ike na-egwuri dị iche iche nyiwe dị ka gị mobile, mbadamba na gị PC. Ị nwere ike igwu a oghere na ọtụtụ casinos na irite ụfọdụ nnukwu uru. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka iwelie ụgwọ ọrụ, aha na casinos enye free slots no deposits atụmatụ. Onye kasị nta na ndị kasị nzọ bụ 10p ka £ 100.
The gameplay bụ mara mma dị mfe, na oghere nwere 5 reels and 10 paylines. The paylines na ofu. The elu na-akwụghachi ụgwọ na akara bụ anọ villains na nwanyi villain bụ ihe kasị na-akwụghachi ụgwọ. E wezụga nke a, ndị ọzọ na akara bụ obi, club, diamond na spade niile na-atọ ọchị akwụkwọ themed.
The ọhịa bụ nnukwu oroma ọhịa na-acha odo odo ndabere na ndị nọ n'ọnọdụ ihe oyiyi ọ bụla ma e wezụga ihe ikposa otu nke bụ ọlaedo ọlaedo acha 7. Ọ bụrụ na ị na adaa 3,4or 5 ikposa akara, ị ga-esi 10, 20 ma ọ bụ 30 free spins. N'oge free spins otu n'ime ndị na-esonụ anụ atụmatụ ga-akpaghị aka ga-ahọrọ- Ịgachi Wild, Ịmụba Wild, Multiplier ọhịa na Ịgbasa Wild. The free atụ ogho na-nd-triggered oge ọ bụla a ikposa akara ala n'oge free spins.
E nwere a atụtụ na Pịa feature. Ị ga-abịa gafee dị iche iche ọlaedo safes n'oge spins. Ọ bụrụ na atọ nke ndị a safes adaa na gị na-esi anwụde mgbe a mma na-triggered. Ugbu a, ị ga-họrọ site na otu nke ndị a safes na ike imeri ruo 50x gị ngụkọta nzọ.
Mara mma na-atọ ọchị akwụkwọ style ndịna, na-akpali atụmatụ na-eji ire ụtọ gameplay na-eme ka a oghere egwuregwu otu nke kasị mma. Ị na-n'aka-emeri nnukwu ụgwọ ọrụ a oghere. Ị nwere ike kpọọ ya dị iche iche online casinos, ụfọdụ nke na-enwe atụmatụ ndị dị ka free slots no deposits ma ọ bụ ego azụ ma ọ bụ na bonuses etc na-aga. Nke a ga-eme ka gị na mmeri ọbụna mma.